Mibvunzo uye Mhinduro pa BSF Mhuka Zvokudya Maggot Chiri • Yurie BSF
Ndapota tibatsirei nemubvunzo uye mhinduro pamusoro pemashiripiti BSF (mutsvuku wevarwi anobhururuka) mu SHARE (akagoverana) kumagariro evanhu akadai saWa, FB, G +, Pinterest, LinkedIn Twitter nezvimwe. Tinotarisira kuti ruzivo rwekugoverana ruzivo runogona kuva mari yedu yekupedzisira pamagumo gare gare. Aaamiinn
Mubvunzo nemhinduro ye Catfish Nursery
Zita renhunzi iri chii?
murwi mutsvuku anobhururuka (hermetia illucens) kana kuti hondo yehondo inobhururuka.
Zvakachengeteka here kuvanhu?
Flies muto mutsvuku (Hermetia illucens) yakachengeteka kuvanhu nokuti havatakuri zvirwere zvemagetsi sezvimwe mhando dzemhuka dzinobhururuka.
Kuti uwane mamwe mashoko, tapota ona >> http://bit.ly/2KTuZu4
Ndeupi musiyano kune dzimwe nhunzi?
Flies muto mutsvuku (Hermetia illucens) haina kuunza kuputika kwehosha.
Nyama inobhururuka (sarcophagidae), ruvara runobhururuka (calliphoridae), imba inobhururuka (musca domestica) uya nehosha.
Panyama, miviri yavo yakakura uye marara zvakasiyana chaizvo.
Age of fly muto mutsvuku nekukurumidza zvikuru pakati pe5 - 8 mazuva, apo dzimwe nhunzi dzinogara kupfuura 30 pazuva.
Flies muto mutsvuku haagoni kudya, uye anorarama kubva kunwa doro kana uchi.
Inokwanisa kudzosera nhunzi dzemagetsi uye nhunzi dzimba.
Usaunza zvirwere zvehutano zvakadai semamwe marudzi ehunzi.
Haingatongorori kudya kwevanhu, nokuti muto mutsvuku anobhururuka usadya
Bereka zvakanaka mumamiriro okunze anonaya.
Yakaratidza migumisiro yakawanda HASINHU iotevera BAU 10 zvakanakira zvipfuwo zveBSF maggot >> http://bit.ly/2IUBtHg
Muto mutsvuku anobhururuka vasingadyi, avo vanodya vana vanonzi mabuva kana maggots kana maggots.
Nzira yekusiyanisa sei murume nemukadzi?
Nzira yekusiyanisa sei zvepabonde muto mutsvuku anobhururuka ndezvekutarisa mazamu avo.
Nhengo dzepabonde dzechikadzi dzinoumbwa sejinga.
Kunyange zvazvo zvikadzi zvepabonde zvakapoteredza segirasi kana gorota.
Ona zvinyorwa pano >> http://bit.ly/2u3GB6p
Unoziva sei zera?
Kuziva nguva ye BSF inogona kuonekwa kubva pamabasa avo ezuva nezuva.
Vechidiki BSF vanowanzomira pamadziro echeji kana pabazi.
Kunyange zvazvo BSF ichishanda vanhu vakuru vanobhururuka uye varoora.
Nzira yekuiwana nayo?
Tora kubva pane zvakasikwa.
Tenga kubva kuvarimi.
Chengetedza nzvimbo yefambiro yeguniti yeIndonesia ye99 >> http://bit.ly/2AadIcv
Inguva yakareba sei?
Pakati pese, BSF mazera ari pakati pemasere gumi nemana gumi nemana.
muto mutsvuku anobhururuka kune dzakawanda munzvimbo dzakawanda uko kune miti inoyerera.
MuIndonesia kunofanirwa kuvapo nokuti nhunzi idzi dzinogona kubereka zvakanaka munyika dzinotyisa.
Ndezvipi mazamu akafanana?
Genitals muto mutsvuku anobhururuka mumuswe, iyo yakareba yakasvibiswa yemadzimai ekuberekwa inofanana neyenderedzwa yedhese.
Izvo zvikadzi zvepabonde zvakanyorova segorosi makona kana sunflowers.
Apo musikana anodzima maitiro ake anoratidza kuti akakura uye akagadzirira kuroorana.
Kuti uwane mamwe mashoko tapota ona> http://bit.ly/2u3GB6p
Mazuva matatu kana mana mushure mekudzingwa, BSF yakakura ndokubva yatora.
Mushure mokusangana mune imwe nyaya yemaawa, mukomana mutsva achafa.
Izvo zvikadzi zvinobhururuka mazuva maviri kusvika matatu shure kwekufa mushure mekuisa mazai avo.
Chii chaanoda zvokudya?
BSF haidyi, panguva yeupenyu hwake chete inonwa mvura yemvura kana uchi.
Pane kune BSF, dzimwe nhunzi dzinomhanya here?
Mune maggot munharaunda yepurazi kune mazhenje mazhinji muto mutsvuku iyo inodzinga imwe mhando dzemapukanana pachayo.
Izvi ndezvikonzero zveboka rehunzi muto mutsvuku Ita rwiyo / chiratidzo chokuti "inoratidza" ndima yavo.
Muenzaniso: kana kati kana imbwa kana shumba inoratidzira ndima yavo neku "kunyura" munharaunda yavo kana muti.
Kazhinji, vakuru vakuru vanoroora mushure mezera re 3 kusvika ku 4 pazuva.
Iwe unobata sei?
BSf inofambidzana mumhepo, ichidzinganisa, uye inobatanidza maitiro avo uye inopinda kumativi emashizha nematunhu akabatana.
Icho chiitiko chekugadzirisa kana mating izvi zvinodzokera kune mumwe kune mumwe.
Kuti uwane mamwe mashoko tapota ona> http://bit.ly/2NpSY5L
Iko nguva yakareba sei yekupedza / kubata nguva?
BSF kuwirirana kana kuroorana kunotora 5 - 10 maminitsi. Uyezve, vanoparadzana.
Vanoita sei mazai?
Iyo bsf maggot yai inosunungurwa kuburikidza nemadzimai emadzimai.
Apo BSF inodzinga mazai, maitiro eBFF anouya achiomerera muzai yezvokuchengetedza mazai semashizha, makadhibhodi, mapuranga nezvimwewo.
Ndeapi BSF akawanda anoisa mazai?
BSF inoburitsa kamwe pakati pe500 - 900 mazai, kana kuti inonzi BSF mazai ekasi
Chii chakakanganiswa neii?
BSf mazai akaumbwa semuchena wakagadzirwa nemasvosve, zvishoma nezvishoma achishandura ruvara kuti ruchenese.
Maggot mwana - vechidiki?
Apo kubvisa mwana mhondi inowira zvakananga mumurwi wezvokudya pasi.
Mucheche anobva ararama uye achikura kwemavhiki matatu kusvika mana.
Nemhaka yei masuruva kana maggots ari makuru?
BSf mapiranga anozivikanwa kuva akaoma nokuti anogona kurarama mumamiriro ezvinhu nepamusoro yemunyu, alcohol, acids (acids) dhani ammonia.
Mumamiriro okunze anotonhorera nekushaiwa kwezvokudya BSF mapurovha achapedza hibernate (asina kushanda).
Uye dzokera kumabasa apo kutonhora kunodzokera kune yakarongeka kana apo magadziro ezvokudya aripo zvakare.
BSf mapuranga kana maggots anorarama nekuwana zvikamu zvakasiyana.
Yakarongedzwa nekushandurwa kweganda ravo.
Chichena chine tsvuku zvino chinoshanduka kuva chiedza chine tsvuku.
Muchikamu chino masvora anogona kukura murefu kusvika 1,5 - 2cm.
Maggot anotanga kuwane rini?
Larvae inotanga kubudirira kubva pakubhururuka, mune zvakatipoteredza nemafuta akawanda.
Mune rimwe zuva masvosve anogona kuparadza marara zvakakwana kaviri kuwanda kwemuviri.
Maggot ane makore mangani?
Pakati pese, nguva ye magotti iri pakati pevhiki nhatu.
Chii chinonzi maggot chinoreva kuparadza?
Gadzirira detrivora zvinoreva idya zvinhu zvakasikwa zvakadai sezvirimwa, zvisikwa zvinokonzerwa nemafuta, zviyo zvekurima uye fodya.
Maggot ine zvakawanda zvakabatsirika?
BSF Maggots ane zvikomborero zvakawanda, nokuti vane vapfumi muzvimiti, mafuta, calcium, amino acids, uye yakakwirira mumapuroteni.
Saka zvinoshandiswa zvakanaka sekudya kwezvipfuwo zvehove, huku, zvikara, nguruve, carnivores uye omnivores.
Kazhinji maggots anoiswa mu:
Maggot inoshandiswawo zvikuru mukurapa nezwi rokuti maggot therapy.
Kana kuti mapurisa anofanira kushandiswa senhumbi yekuziva nguva yechitunha.
Mune dzimwe nyika yakatova chikafu chinodyiwa uye inowanikwa muneresitorendi. kana kuitwa muhomwe.
Nei Maggot BSF?
Izvo zvakakosha kubvira pakutanga kuti unonzwisisa zvakanyanya kuti mune zvipfuwo kune mapupa emhando muto mutsvuku anobhururuka kana hermitia illucens.
Musati mhuka dzakasvibirira dzinobhururuka dzinotakura zvirwere zvehosha.
Nzira yekusiyanisa nayo iri nyore kwazvo, BSF yakasviba uye fukasi yakasvibirira.
BSF yakareba uye haina zvishoma. Apo mhezi dzakasvibirira dziri pfupi uye mafuta.
Prepupa ndiyo chikamu chemashure makuru vanhu vanenge vatatu kusvika mana.
Larvae yakazosvika padanho rino kazhinji inowanikwa zviri nyore kubva kumucheka wakashanduka wakaita dema.
Ndiyo chipa here?
Nhengo yepa pupa kana yecocoo iyo majeko emagetsi asinganyunyuti uye anoreva zvakasimba sekufa.
Muchikamu ichi nzira yekugadzira nhengo yezizizi, kubva pameso, patsoka, mudumbu, musoro, nezvimwewo.
Pupa kana kocoon inenge yevhiki imwe chete isati yashanduka kana kuchinjeka mhiri muto mutsvuku.
Ndeipi iyo yakanakisisa yemaggotti yakagadzirwa?
Chigadziko chemadziro epamapazi akagadzirwa nesente & brick.
Chigadziko chemadziro epamapazi akaitwa zvidhinha.
Pota chigadziko kubva padvert material
Chikwata chepakati pezvigadziro zvetirapa kana bhaniri
Bhokisi rebhokisi rakagadzirwa nehuni bhokisi.
Multi-storey wooden shelf container.
Pombi yepurasitiki midziyo kana mashizha emhando dzose.
Fruit basket box container.
Kana nheyo yesimbi yakadzika inoita maggot isati yatiza?
Pond yezvimene zvine zvigaro zvemasimende zviri nani pane dzimba dzepasi-pasi, nokuti kupararira kwemvura kunogona kuwedzera.
Kana dziva iri mumhando yesamende, inofanira kupiwa gomba apo mvura inodururwa kubva padziva.
Zvakadini nekushandisa plastiki tub kana tambo?
Zvikamu zve plastiki tub kana tarpaulin inofanira kupiwa gomba kubvisa mvura yakawanda uye kutarisira kuitika kwemvura ine simba.
Kukura kwegomba uye mari yacho inofanira kurongeka uye kuvimbisa kuti kupararira kwemvura kwakanyatsonaka.
Chii chinoitika kana vhidhiyo inonyorova?
Izvi zvinoratidza nhau dzisina utano hwekugadzirwa kwemagetsi uye dzinokonzera kunhuhwirira kwakashata.
Maggot haisi utano nokuti hutano hwemhepo hunovhiringidzika.
Mamwe maguru achabuda achienda kumusoro ndokumhanya.
Ndezvipi zviratidzo zvemashoko ane maggot ane utano?
Unhu hwehutano hwemaggotti hwakaita sezvinotevera:
Mhizha inosununguka uye haibatsiri uye haisi mafashamo.
Kune nguva dzose mitsva inhau.
Maggot media is key to cultivation, what does that mean?
Maggot media inzvimbo iyo Maggot anorarama pamwe nekudyisa maggot pachayo.
Kana zvakasikwa kana magog media ane hutano, maggot achave ane hutano.
Kusiyana naizvozvo, kana maggot media isiri noutano hwakanaka, inobata hutano nekukura kwemagetsi.
Unofanira kupa rini mhizha mutsva?
Nguva dzose maggot feeds anopiwa, mhizha inotarirwa kwevhiki imwe chete kusvika kwemaviri zvakapiwa pamwe chete pamusoro pezvinyorwa.
Nzira yekuchengetedza maggot media?
Maggot media inofanira kuchengetedzwa nekuwedzera mutsvaga mutsva nguva dzose.
Mharidzo inochengetwa yakasviba nekudiridza nguva dzose.
Ndezvipi zvinogona kushandiswa sevhidhiyo yemagetsi?
Iyo yakasvibira mujisi uswa.
Nzvimbo yemafuta kana manyowa.
Kompositi migumisiro yebhakitiriya fermentation.
Dhavha / zvihuta / mhou / mbudzi / mbira / chicken / dhaka manyowa.
Cocopit kana kokonati fiber.
Davi kana bran.
Ona nzira pano >> http://bit.ly/2CuSxTY
Ita sawdust inogona kushandiswa seyamagog media here?
Iwe unogona, kana nhepfenyuro inonyanya kuwanika matiri.
Ko magog media angave akanganiswa nemamwe mhizha here?
Iwe unogona, chinangwa ndechokuti tishandise zvinowanika mune zvigadzirwa mumasangano edu.
Ko magetsi ane magetsi anofanira kudirwa here?
Chaizvoizvo vhidhiyo inogona kushandiswa ndeyehupenyu hwehupenyu, hwakadai se:
Davi kana bran >> http://bit.ly/2IVj3G3
Mafuta epalm Palm >> http://bit.ly/2Nsy9qe
Mafuta echipiriso chemafuta.
Chicken manure. >> http://bit.ly/2EEktY9
Goi manure. >> http://bit.ly/2EA7lCl
Cow manyore. >> http://bit.ly/2RcfxPT
Unosiyanisa sei kasgot munhare?
Kasgot kana maggot anocherechedza kana madonhwe emagogota anofanira kusanganiswa munzvimbo imwechete.
Kuti aparadzanise cassava kubva kune vhidhiyo, zvakajeka kuti maitiro ekansava ari madema, kubwinya kwakafanana negorosi mbeu.
Ko manyowa emombe angapiwa zvakananga kumaggotwe here?
Ona nzira pano >> http://bit.ly/2Lpt0OR
Ko mushonga mutsva unogona kushandiswa sekudya magog?
Ona nzira pano >> http://bit.ly/2RcfxPT
Chii uye ndiani mhuka?
Zvinokonzera kana magogwa mavanga mavanga ndeaya:
Ndezvipi zvinotarisirwa neimba yakanaka BSF / yakavharwa?
Iwe unogona kuona Maggot zvakanaka kugara mumba pane >> http://bit.ly/2tWfj2o
Zvimwe zvishandiso nemidziyo zvinofanira kupiwa zvakadai sokuti:
Maggot kuwedzera nzvimbo
Shizha rinoputika nzvimbo
Nzira Yokuita Maggot Pasta
Nzira Yokuita Maggot
Nzira yekuita maggot pellets
Ko maggotti anogona kukura mumhepo inotonhora here?
Kugadzira maggot hakuiti zvakananga nekushisa kwemamiriro okunze, zvakadai sekupisa kunotonhora kana kutonhora, nzvimbo dzakadzika kana dzakaoma, etc.
Nokuti kukura kwemagetsi kunogadzirisa zvakananga ndiyo mamiriro emagetsi ane mharidzo pachayo. Uye iyo maggot inogara mhizha inogona kugadziriswa maererano nezvinodiwa magog.
Ko Maggotti inogona kuzaruka here?
Kugadzira maggot kunogona kuitwa kunze kana kunze kana muimba yakavharwa.
Kukura kwegoroti kunogonawo kuitika munzvimbo ine mvura inonaya uye ine mhepo isina simba yezuva uye chiedza chezuva.
Nhanho Nhanho Kukurudzira Maggots
Mazano ekudzidza maggrim kukura inofanira kuitwa mumatanho, nhanho nechikamu kuitira kuti zvigone zvigone kuwedzerwa.
Uyezve, migumisiro yemuitiro pane imwe nhanho inofanira kuongororwa zvakanaka kana inoda kururamiswa.
Ikoko nhanho inotevera nhanho maggot, kusanganisira kubudisa maggot
Mazano eVakatanga uye vakuru nokuda kwezvakanakisisa
Maggot Marketing Marketing Guide
Kugadzirwa kweMaggot kuri nyore kwazvo, imwe nzira ndeyokuzvitengesa iwe pachako kuti ishandiswe senhumbi yekuderedza mari yekutenga pellets.
Kana iwe usina zvipfuwo zvako, unogona kuswedera uye kusvika kunzvimbo dziri pasi apa:
Nzvimbo yekurimisa mvura yakachena uye nzvimbo.
Mvura yakachena yehove yevachengeti uye nzvimbo.
Mharaunda uye pakati pezviyo zvehove dzeefel.
Mhemberero yeshiri yemunharaunda.
Zvokuzora uye mishonga yemishonga.
Zvimwe zvinokonzerwa nemishonga yemishonga.
Inosanganiswa kusvibiswa kwemarara nemabhangi emarara.
Yakatanga mhuka yekupa bhizinesi.
Kuwedzera bhizinesi nehove yebhizi.
Sengai kuna Yurie BSF.
Tarisa kuti ungatengesa sei ku Yurie BSF mvumo kune avo vari kushaiwa
Kuita maggot >> http://bit.ly/2RcS7tQ
Maggot kutenga >> http://bit.ly/2ELaFLS
Direct Kudzidzisa Mumhuka Kubata
Kana ukasarudza kutora chikamu mukudzidziswa kwekugadzira maggot, zvinokosha kwete kungokwanisa kubudisa maggot.
Asi sarudza nzvimbo yekudzidzisa yakaratidza kubudirira, kusanganisira kugovera chigadzirwa.
Izvi zvinotevera chirongwa chekudzidzisa naYurie BSF:
1. KUTANGA KWEMAGGOT BSF
Iwe uchakwanisa kuunza nzvimbo yakasununguka BSF maggot ASOUT BAU, nemigumisiro yakawanda mukati memwedzi ye1,5.
Dzvanya MUMWE MUPENYU> http://bit.ly/2Lpt0OR
Iwe unogona kusanganisa BSF maggot ane FOMI YAKANAKA kuitira kuti zvipfuwo zvikurumidze kukura.
Dzvanya MUMWE MUPENYU> http://bit.ly/2SXcBE8
SELL YURIE BSF !!! Iwe haufaniri kunge wakavhiringidzika pamusoro pekugadzira maggot, nokuti Yurie BSF achaitenga
Dzvanya MUMWE MUPENYU> http://bit.ly/2Bu7zHQ
Yurie BSF yakapa Rp100.000.000 best friend shamwari yaungashandisa kuwedzera simba rekugadzira kwebhizimisi rako rekugadzira maggot.
Dzvanya MUMWE MUPENYU> http://bit.ly/2oR86hp
5. AMBASSADOR YURIE BSFANDA HAASARI.
AMBASSADOR YURIE BSF akagadzirira kuvapo purazi rako
BHUKU MAZVU! 0812-2105-2808
Pa YURIE BSF UNIVERSITY iwe uchapiwa ruzivo rwepamusoro yepamusoro-soro yekudzidzira.Kuita kuti chirongwa cheBFF chazvino chine kunhuhwirira kunoenderana neSOP yezvino BSS dzisina kunyanya (standard operation procedure).
Dzvanya MUMWE MUPENYU> http://bit.ly/2A4kMY1
Dzvanya MUMWE MUPENYU> http://bit.ly/2Lm1rGt
Iwe uchange uri chikamu chekusimbiswa kwebhizimisi rezvematongerwo enyika kuti usangane nemitengo yemisika uye yepasi pose.
Iyi purogiramu yeCSR inotarisirwa kune avo vasingakwanisi kutenga mari yezuva rekushandira BSF pasina kunhuwa.
10. KUNYENGA UYE KUTAURA
Kutanga mabasa edu ezuva nezuva nemunyengetero ndeyekuti isu tinofanira kufamba mberi zuva rose naMwari.
Saka iyi Yurie BSF haina 10 purogiramu ndiyo MAIN uye NUMBER chimwe chezvirongwa zvebasa ra 9 dzakapiwa.
99 Nzvimbo yeRonda
Pane mavhivi varimi muguta rako here?
Tarisa nzvimbo ye99 yemapurazi eIndaneti
Kunyange zvazvo BSF yakachengeteka kuvanhu, asi mukuita kwedu tichasangana nemarara, mhodzi yemombe nemarara zvakadai semichindwe yemafuta sludge kana kuti tofu tsvina nekudaro.
Saka zvinokosha kuti isu tishandise magirafu. Izvi chaizvoizvo kuti tisaiti maoko edu ari kusvibiswa nemishonga uye zvirwere.
Sei Maggot achifanira kuva chinhu chekurima?
Maggot ane zvakakwana zvakakwana zveproteine ​​zvine mishonga saka zvakanaka kwazvo kushandiswa kumhuka yekudya.
Maggotti zvokudya zviduku zvikuru, zvakadai semakakiti emarara, zvipfeko zvezvokudya, manyowa, fodya yefekitari inowanikwa nyore nyore uye yakasununguka.
Kukura kwegoroti kunenge kuri nyore uye kusina mari.
Kubereka kunofanana nekukurumidza uye kwechisikiro kunze kwekuvirisa, pasina zvinodhaka, pasina mishonga.
Ngozi yezvirwere mukugadzira maggot isinganyanyi kukosha.
Maggot anotengesa matarisiro akaita sejecha rista, maggotwe eupfu, maggotti emagetsi akazaruka zvikuru.
Makomborero eGreen Flies?
Hapana chimwe chisikwa chimwe chete chaMwari chisingabatsiri, kusanganisira mapupa emagetsi anoshandawo.
Ndapota shandisai vhidhiyo inotevera kuti uwane zvinogona kutorwa kubva kumapute.
Dzvanya >> http://bit.ly/2rQPGio